Ogaden News Agency (ONA) – Militariga Myanmar Ayaa Qirtay Inay Dad Muslim Ah Laayeen.
Militariga Myanmar Ayaa Qirtay Inay Dad Muslim Ah Laayeen.
Posted by ONA Admin	/ January 12, 2018
Ciidammada Myanmar ayaa markii u horaysay qirtay in ay ku lug lahaayeen dilkii dhawaan loogaystay dadka Muslimiinta ah ee qawmiyada Rohingya, arrintaasina ay ka dhacday Gobolka Rakhine.
Milatarigu wuxuu sheegay in baadhitaan uu sameeyay uu ku ogaaday in afar ka mid ah laamaha amaanka ay ka qaybqaateen hawlgal 10 ruux lagu dilay oo ka dhacay tuulada Din oo u dhaw Maungdaw. Warbixinta ayaa lagu sheegay in afarta askari ay gacan siiyeen dadka tuulada si ay u qaadaan weerar aargoosi ahaa oo ka dhan ahaa wax ay ugu yeereen “Argagixisada Bengali”.
Myanmar ayaa lagu eedeeyay in ay hawlgalo isir sifayn ah ka wado Gobolka Rakhine. In kabadan 650,000 oo qawmiyada Rohingya ah ayaa u baxsaday dalka ay dariska yihiin ee Bangladesh tan iyo markii ay rabshaduhu qarxeen bishii August, waxaana laga soo sheegay warar xanuun badan oo ay ka mid yihiin dil wadareedo, kufsi iyo jidh-dil.
Milatariga oo gacan ka helaya kooxo deegaanka ah oo is abaabulay oo Budhiste ah ayaa lagu eedeeyay in ay gubayaan tuulooyinka ayna weerarayaan oo dilayaan shacabka. Milatariga Myanmar ayaa diiday in uu shacabka bartilmaameedsanayo, wuxuuna ku adkaystay in uu la dagaalamayo malayshiyaadka Rohingya oo kali ah.
Myanmar ayaa saxafiyiinta iyo baadheyaasha caalamiga ahba u diiday in ay tagaan Gobolka Rakhine si ay baadhitaan ugu sameeyaan eedaymaha iyo tacadiyada halkaas kadhashay. Milatariga ayaa bishii hore ku dhawaaqay in uu baadhitaan ku samayn doono xabaasha ay ku jiraan 10 ruux ee laga helay agagaarka Inn Din.
Natiijada baadhitaanka oo lagu baahiyay barta uu Facebook ku leeyahay taliyaha ciidanka ayaa lagu sheegay in xasuuqaasi uu dhacay 2 September.